Apple Bhadhara setup gwaro | IPhone nhau
Google neSamsung nemapuratifomu avo akasiyana ekubhadhara, kunyangwe vanga vari pamusika kwenguva shoma, vatove mune dzimwe nyika uye vave nazvo yakarongerwa kumhara muEurope kutanga kwegore rinouya, musi unofungidzirwa kuti Apple Pay unosvika kune dzimwe nyika nhatu nyowani, dzakabatana neAmerican Express, senge Spain, Singapore neHong Kong. MuUnited States, Apple Pay yakamira kuve yakasarudzika mwedzi yakawanda yapfuura, sezvo yanga ichiwanikwa kweinopfuura gore. Pamwe chete neUnited Kingdom, Canada neAustralia ivo parizvino ndivo nyika chete dzinogona kubhadhara vashandisi ve iPhone kuburikidza neApple kana Apple Watch vasina kutora chikwama chavo muhomwe.
Canada neAustralia ndidzo dzave nyika dzekupedzisira kugamuchira Apple Pay, mazuva mashoma apfuura, uye kune vese vashandisi vatsva papuratifomu, Apple Iye achangobva kuburitsa vhidhiyo dzidziso pane yake YouTube chiteshi maanotiratidza mashandiro ayo uye maitiro ekuigadzirisa. zvakafanira kuti ukwanise kushandisa Apple Kubhadhara kana pasina dambudziko.
Muvhidhiyo tinogona kuona kuti tingawedzera sei makadhi kuchikumbiro, ruzivo nezve chengetedzo, maitiro ekubhadhara zvisina kutaurirana, zviteshi zvinoenderana nezvimwe zvakawanda. Kune vese vashandisi avo vanotoziva nekushandisa iyi nyowani tekinoroji, vhidhiyo iyi haizokupe chero yakakosha nhau, sezvo yakagadzirirwa vashandisi vanogona veiyi dhijitari yekubhadhara chikuva.
Muvhidhiyo, Apple inosimbisa pfungwa yekuti Apple Pay inzira yekubhadhara yakachengeteka zvakanyanya pane kushandisa makadhi epanyama, nekuti isu hatifanirwe kupa yedu kadhi nhamba, CVV kana chero imwe mhando yedata inoenderana nekadhi. Isu tinongofanirwa kushandisa zvigunwe zvedu kuratidza kuti isu muridzi wayo zvakakodzera uye muripo uchaitwa nekukasira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Apple Bhadhara setup gwaro